nidaamka waxbarashada ee Ukraine. info waxtar leh ee ardayda ajnabiga ah
nidaamka waxbarashada Ukraine waxaa ku nidaamsantahay sharciga ee Ukraine iyo ka mid:
waxbarashada iyo barbaarinta carruurta;
waxbarashada dugsiga sare;
Waxbarashada farsamo iyo xirfadeed;
Waayo, Ukraine, sida Yurub badan, waxbarashada bilaabataa hay'ad waxbarasho pre-dugsiga, sida caadiga ah – ka kindergarten. In 2 (mararka qaar la 1.5), kid helo qabaal, la 3 – in kooxda ka yar.
Mararka qaarkood, qoyska go'aansado inuu baro ilmaha guriga, laakiin tan iyo markii uu 2001, khasabka ah waxbarashada iyo barbaarinta carruurta 5 sano jir. Waalidku waxay dooran karaan xanaanada ama koox joogista gaaban, hadda waa ka sii badan 1,000 Kooxaha sida hawlgala Ukraine. In dugsiyada sare group ka shaqeeya si ay u diyaariyaan carruurta dugsiga. ardayda Future waxaa heli aqoon aasaasi ah, iyo sidoo kale bartaan jidka dugsiga, macalimiinta iyo fasalka. Iyadoo 6 sano jir ilmo aadi kartaa dugsiga.
Waxaa waajib ah oo lagu helay in noocyada kala duwan ee dugsiyada, inta badan – ee dugsiga sare. Waxay leedahay saddex heer:
waxaan – dugsiga hoose (fasalada 1-4), waxay bixisaa waxbarashada guud hoose,
II – dugsiga hoose (fasalada 5-9), waxay bixisaa waxbarashada guud ee aasaasiga ah;
III – Dugsi sare (fasalada 10-11), waxay bixisaa waxbarasho dhameystiran dugsiga sare.
waxbarasho Dejinta – horumarka dhinac walba ee ilmaha, isaga aqoon in la siiyo, taas waxay u baahan tahay in ay bulshada. Dugsiga waa kor go'aan-is xirfadeed, horumarka jireed iyo formation of heerarka anshaxa iyo anshaxa aasaasiga ah.
horumarinta dheeraad ah oo ka mid ah awoodaha iyo talanti gaari ee waxbarashada dadban. dugsiyada waxaa ka mid ah naadiyada isboortiga, dugsiyada farshaxanka, kala duwan oo ka mid ah kooxaha arday iyo ururada la midka ah, dadweynaha ama kuwa gaarka ah.
Waxbarashada farsamo iyo midda xirfadeed
Waxaa diiradda on helitaanka takhasuska gaar ah. Sidaa darteed, waayo, waxaa iyaga in loo soo diro kuwa goobaha waxbarashada in tababar xirfadaha shaqeeya. Tani dugsiyada xirfadaha iyo dugsiyada sare (farshaxanka, farsamo, sare), shirkadaha iyo warshadaha dugsiga-beeraha, xarumaha tababarka iyo meelaha la midka ah. Waxay sidoo kale waxaa ka mid ah xarumaha tababarka xirfadaha, tababarka iyo kuwii horeba shaqaalaha.
dugsiyada xirfadaha inta badan iskaashi la shirkadaha – tababarka loogu talagalay macaamiisha. Si aad u hesho xirfad shaqeeya arday guud ahaan looma baahna, inay dugsiga dhigtaan, maxaa yeelay, waxaad la tababaray karaa si toos ah in wax soo saarka.
Waxbarashada sare ee Ukraine waxa uu u qaabsan iyadoo la raacayo nidaamka waxbarasho ee dalalka horumaray, kuwaas oo kormeeraya by UNESCO, Qaramada Midoobay iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah. Waxay bixisaa sayniska aasaasiga ah, tababar xirfadeed oo wax ku ool ah, kuwii horeba iyo aqooneed ee ardayda.
Foomamka waxbarasho ee hay'adaha waxbarashada sare waa kala duwan: waqti buuxa, waqti-dhiman, masaafada ama marka la isku daro, kaas oo isku daraa dhawr ah noocyadan.
Waayo, jaamacadaha, waxaa jira afar heer oo aqoonsi:
waxaan – dugsiga farsamada iyo Hay'adaha waxbarashada sare u dhiganta;
II – College oo isaga u dhigantaa hay'adaha waxbarashada sare;
III iyo IV (ku xiran tahay natiijada aqoonsi) – machadka, conservatory, academy, jaamacad.
Tan iyo markii ay 2008, shardi ah gelitaanka waxbarashada sare waa ku dhaco qiimeynta madax-bannaan dibadda (UPE). In 2016, ardayda imtixaanka ku qaadan doonaan maadooyinka sida:
luqadda Yukreeniyaan iyo suugaanta, taariikhda of Ukraine (wakhtiga hore ilaa maantadan la joogo), chemistry, physics, biology, xisaabta, juqraafiga, iyo sidoo kale – English, Spanish, Jarmal, Ruush iyo Faransiis.
Ka dib markii qalin waxaad ka heli kartaa shahaado – in post-graduate iyo phD ee waxbarashada. Tan waxaa ka mid ah qoraal iyo difaaca sha ah – PhD ama doctorate siday u kala horreeyaan – iyo sidoo kale helitaanka ee cilmi-baarista iyo cilmiga waayo-aragnimo.
waxbarashada wadashada waxay fursad inay helaan xirfad cusub, xirfad ama shaqo. Inta badan, taasi dhacdo ku saleysan waxbarashada hore u helay dugsiga hore, inkasta oo aad ka heli karto brand cusub oo khaas ah. Si qalin hay'adaha waxbarashada yihiin machadyada (xarumaha), tababar dheeraad ah ama kuwii horeba, unugyada muhiimka ah ee hay'adaha waxbarashada sare, hay'adaha waxbarashada xirfadeed, xarunta cilmiga ah iyo habka waxbarashada xirfadeed iyo hoosaadyada ee ururada iyo shirkadaha.
UPD: Tan iyo markii ay 2016 Hawsha aqbalka in jaamacadaha Ukraine ee ardayda shisheeye aviable via Xarunta Admission Yukreeniyaan.